Iqhutshwa yintuthuko yezomnotho yomhlaba kanye nokufunwa kwezimakethe, imboni yemithwalo yezwe lami ithuthuke ngokushesha kule minyaka eyishumi edlule, futhi ukwanda kwesidingo semakethe kulethe izinkampani eziningi zemithwalo emzileni wentuthuko esheshayo. Ngokombono wemodeli yebhizinisi, i-lug yasekhaya ...
Ungayithola kanjani ikhotheshini enembile yephrojekthi yakho yesikhwama?
Amakhasimende amaningi afuna izimboni zezikhwama anethemba lokuthola izingcaphuno ezinembile ngokushesha okukhulu ngojosaka bazo abenziwe ngokwezifiso. Kodwa-ke, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, kunzima kubakhiqizi ukukunikeza ikhotheshini enembile kakhulu ngaphandle kwemininingwane yesampula noma yesikhwama. Eqinisweni, kunendlela yokuthola ...
Kungani ngokwezifiso ubhaka yokukhiqiza ine "MOQ"?
Ngikholwa ukuthi wonke umuntu uzohlangabezana nenkinga yobuningi be-oda eliphansi lapho efuna abakhiqizi ukwenza ngokwezifiso izikhwama zobhaka. Kungani imboni ngayinye inesidingo se-MOQ, futhi yini inani elilinganiselwe le-oda elincane embonini yezikhwama ngokwezifiso? Ubuncane be-oda lokugcina ...
Qonda inqubo yokukhiqizwa kobhaka ngomzuzu
Uma kukhulunywa ngenqubo yokukhiqizwa kojosaka, abantu abaningi bangacabanga ukuthi inqubo yokukhiqizwa kojosaka nezingubo iyefana, phela imishini yokuthunga isetshenziselwa yomibili. Eqinisweni, lo mbono awulungile. Kunomehluko omkhulu phakathi kwenqubo yobhaka nezingubo. Ku co ...
Kwenziwe ngentando LOGO izikebhe ubhaka
Indlela yokuphrinta ye-LOGO ekwakhekeni ngokwezifiso kuyinkinga ehlangana njalo. Ukuze uqinise isiko lenkampani futhi uqhakambise isithombe senkampani, ukuphrinta kwe-LOGO kubaluleke kakhulu. Ikakhulu, ukwakheka kwezinye izinkampani kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kudinga ukwenziwa ...